Isingeniso - Hangzhou Savgood Technology Co., Ltd.
I-EO / IR
I-Savgood Technology - Umenzi wamamojula wekhamera ye-Zoom.
IHangzhou Savgood isungulwa ngoMeyi, 2013. Sizibophezele ukuhlinzeka ngesixazululo se-CCTV esiqeqeshiwe.
Iminyaka yokuqala, besimane sisabalalisa imikhiqizo yenguqulo ye-Hikvision ne-Dahua English, siyithumela emakethe yaphesheya kwezilwandle, eNyakatho Melika, eYurophu, e-Aisa nase-Afrika. Singabanye babahlinzeki abaphezulu abayi-10 begolide abasesigabeni sokuphepha ku-Alibaba.com.
Kusuka ngonyaka ka-2016, sathola i-mI-ost yezixazululo ze-Long Range Zoom zisebenzisa i-Normal box camera ne-Motorized Lens, ebiza kakhulu, engazinzile futhi eyi-Auto Efficiency Auto Focus.
Ukuxazulula izingqinamba zamanje zesixazululo samakhamera we-Long Range Zoom, ngokususelwa kukhwalithi ye-SONY edumile, ephezulu yesithombe kanye ne-ultra starlight Exmor / Exmor R CMOS Sensor, Ithimba le-Savgood elinabahlinzeki liqale ukuklama nokuthuthukisa izinhlobo eziningi zamamojula wekhamera ye-Zoom, gxila ku-Ultra LONG Amamojula ekhamera we-RANGE ZOOM. Amamojula amaningi akhishwe ngempumelelo, ngokwesibonelo, i-4Mp 88x Zoom (10.5 ~ 920mm), 2Mp 80x Zoom (15 ~ 1200mm), 2Mp / 4K / 8Mp 50x Zoom (6 ~ 300mm), inguqulo ye-Network & Digital.
Bangasekela imisebenzi yethu esheshayo nenembile ye-Auto Focus algorithm, Defog ne-IVS (Intelligent Video Surveillance) imisebenzi, umthetho olandelwayo we-Onvif, i-HTTP API yokuhlanganiswa kohlelo lweqembu lesithathu.
Futhi, njengamanje isixazululo sekhamera esishisayo yi-analog manje, uma kunesixazululo senethiwekhi, sidinga amaseva wevidiyo edijithali ukuguqula ividiyo ye-anglog ibe yiNethiwekhi, okuyizindleko eziphakeme, futhi ividiyo ibi kakhulu, ukulawula ukubambezeleka. Ithimba leSavgood elinabahlinzeki bethu liphinde lidizayine futhi lithuthukise amamojula we-IP wamakhamera we-digital thermal.
Manje wonke amamojula wekhamera yokusondeza namamojula ekhamera ashisayo athengiselwa amazwe amaningi aphesheya kwezilwandle, i-United States, iCanada, iBrithani, iJalimane, i-Israel, i-Turkey, i-India, i-South Korea njll. imishini, imishini yezimboni, imishini yeRobot njll.
Futhi ngokususelwa kumamojula wethu wekhamera yokusondeza ebonakalayo namamojula ekhamera ashisayo, siphinde sahlanganisa eminye imikhiqizo yokuncintisana, Amakhamera we-PTZ, amakhamera we-Drone Gimbal njll. Futhi singenza insizakalo ye-OEM ne-ODM ngokuya ngezidingo zakho.